Archive du 20190202
Andry Rajoelina Nomen’ny depiote fahefana tsy refesi-mandidy
Lany tamin’ny alalan’ny tsangan-tanana tetsy amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny lalàna fehizoro manome fahefana ny filoham-pirenena hanao lalàna noho ny ho fahabangan-toeran’ity andrim-panjakana ity aorian’ny 5 febroary hahataperan’ny fe-potoam-piasany.
Fitondrana sy ny tetikasa IEM Nokianin’ny fikambanana GPCM mafy
Manara-maso tanteraka ny teboka 13 napetraky ny K13 tamin’ny fampielezan-kevitra ny GPCM (Goupement des jeunes Patriotes pour les Changements de Madagascar), hoy i Njaka Andriantsoa,
Fitantanana ny firenena Ho avy indray ny fifanaraham-piaraha-miasa hafahafa ?
Ahiana ao anatin’izao fananan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fahefana feno hanao lalàna izao no hisian’ny fanararaotana, toy ny fifanarahana avo lenta sy resaka famarotana tanindrazana an-kolaka na mivantana,
Depiote Charles Andriamahefa « Mbola hirotsaka aho ! »
Ny 5 febroary izao no hifarana ny fotoam-piasan’ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza. Lany tamin’ny alalan’ny depiote miisa 96 amin’ny 101 koa moa iny omaly iny ny tolo-dalàna manome fahefana ny filoham-pirenena aorian’io daty io mandritry ny fahabangan-toerana eny anivon’ny parlemanta eny.
Depiote Félix Randriamandimbisoa Tsy misy fifandanjam-pahefana intsony eto
Tsy nandany iny lalàna manome fahefana feno ny filoha iny ny antoko Tiako i Madagasikara na lany teny amin’ny antenimieram-pirenena aza.
Fanambaram-pananan’ireo mpitondra Tokony hatao hitan`ny vahoaka
Araka ny baiko nomen`ny filoham-pirenena, omaly tamin`ny 9 ora maraina no nanao fanambaram-pananana ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny mpikambana eo anivon`ny governemanta tarihany, teo anivon`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC).
Andotiana, tovovavy Malagasy monina any Frantsa 25 andro izay no nanjavonany
Tsy mbola hita hatramin’ny omaly folakandro, fiandohan’ny volana febroary i Andotiana, ilay tovovavy kely teratany Malagasy26 taona nipetraka tao Rueil-Malmaison, Ile de France, toerana nanofany trano niaraka tamin’ireo namany, rehefa nanjavona ny 9 janoary lasa teo.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Rado Rakotonanahary Sady mpanamory Cross Car no mpitendry Jazz ikoizana
Mbola hijanona eo amin’ny taranja « Sport Mécanique » hatrany amin'ity anio ity ny pejy manokana mahazatra anao hitaterana an’ireo Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy eto amin’ny gazety Tia Tanindrazana.
Ligin’ny basikety eto Analamanga Haverina ny fifaninanana Trump
Nahavita ny AGO “Fivoriambe” fanaony isan-taona ny ligin’ny basikety eto Analamanga notarihan-dRasolomalala Fidy filohany.
Edito Mandeha ny mandeha !
Mandeha ny mandeha, hoy ny ankizy. Andeha atao hoe tsy hay indray aloha izay tao ambadik’iny fandaniana lalàna manome fahefana ny filoham-pirenena ankehitriny omaly iny fa ny azo ambara dia efa naman’ny nampoizina ihany ny zava-nitranga.
Vatsim-pianarana mankany ivelany Oniversite vahiny 24 no tonga etsy amin’ny Carlton
Notanterahina omaly zoma 1febroary tetsy amin’ny hotel Carlton Anosy ilay “salon” karakarain’ny Fanéducation agency entina hampahafantarana ny mpianatra Malagasy ireo karazana oniveriste azo hianarana any ivelany.
Orinasa Tozzi Green Mitsinjo ny toekarena eny ifotony
Mila miainga eny ifotony ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Saika mitodika amin’ny fampiroboroboana ny toekarena eny ifotony ny antom-pisian’ny orinasa italiana Tozzi Green.
FANONDRANANA AN-TSOKOSOKO NY HAREM-PIRENENA “ Fa angaha nisy famindram-pahefana amin’ny trafika koa ?”, hoy ny AVG
Tanana zatra mitsotra ! Manoloana ny fahatraran’ny mpitandro filaminana sokatra 8 sy Soavalindriaka 6 Kg, tamin’ny 12 ora atoandro ny 28 janoary farany teo, tao amin’ny fokontany Bemasoandro, Antanifotsy, RN7 dia velom-panontaniana ny AVG :
Malagasy mitrongy vao homana 2.000 Ar no iaretana adin’ny folo
Anisan’ny asa tena kely karama indrindra ny varotra anana nefa tena be mpanao tokoa. Lohalaharana amin’izany ireo ray aman-dreny efa misotro ronono tsy mahatakatra ny maka anana amin’ny sobika na amin’ny gony fa tsy maintsy miantoka.